के यो मेक्सिकोमा मेरो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स किन्न सुरक्षित छ? - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
समुदाय, कम्पनी भारी खेल स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण मनोरञ्जन कम्पनी औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर समाचार, कल्याण समुदाय, कल्याण प्रेस कम्पनी, चेकआउट घरपालुवा जनावर समाचार
मुख्य >> औषधि जानकारी >> के यो मेक्सिकोमा मेरो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स किन्न सुरक्षित छ?
के यो मेक्सिकोमा मेरो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स किन्न सुरक्षित छ?
बढ्दो र अक्सर पहुँचभन्दा बाहिरको प्रिस्क्रिप्शन औषधि मूल्यहरूले अन्य मानिसहरूलाई तुलनात्मक शपिंगको फाइदा र विपक्षमा ध्यान दिन मानिसहरूलाई उत्प्रेरित गरेको छ। तर के यो सुरक्षित छ मेक्सिकन फार्मेसीबाट तपाईंको प्रिस्क्रिप्शन किन्न?
विदेशमा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स किन्ने सम्भावित खतराहरू
विदेशमा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स किन्नुमा तपाईंको पैसा बचाउन सकिन्छ, तर दिमागमा राख्नुपर्ने जोखिमहरू पनि छन् वारेन लाइट, MD , मा चिकित्सा मामिला निर्देशक लेनोक्स स्वास्थ्य ग्रीनविच गाउँ , जो अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा औषधि मा अनुभव छ।
उनी भन्छनन, अन्य मुलुकहरुमा बेच्ने औषधिहरू समान मापदण्डमा पर्नु पर्दैन, संयुक्त राज्यका नियामक निकायहरूले वितरक र उत्पादक दुबैलाई पक्रेका छन्।
यसको मतलब यो हुन सक्छ कि तपाइँ गलत डोज र / वा सक्रिय संघटकको साथ समाप्त हुन्छ, यद्यपि औषधी तपाईको डाक्टरले तोक्नु भएको जस्तो देखिन्छ। यदि तपाईं एक औषधि एक विदेशी फार्मेसीमा किन्नुभयो भने तपाईं एक ड्रग रिकलको बारेमा अन्धकारमा पनि अन्त्य हुन सक्नुहुनेछ।
डा। लिच भन्छिन्, संयुक्त राज्य अमेरिकामा हाम्रो आफ्नै नियमित उत्पादन प्रक्रियामा समस्या आएको छ, जहाँ ड्रग्सले कार्सिनोजेनको ट्रेसहरू पाउँथे र फिर्ता लिइन्थ्यो, डा। लिच्ट भन्छन्। यदि एक अर्को देशमा लागूपदार्थ सम्झिन्छ भने, तपाईंलाई यसको बारेमा थाहा पनि छैन।
केहि मेक्सिकन फार्मेसीहरू ठीक हुन सक्छ
अमेरिकी सीमाना नजिकैका शहरहरूमा केही मेक्सिकन फार्मेसीहरूबाट पर्चेको औषधी वास्तवमै सस्तो र सुरक्षित दुबै हुन सक्छ भन्ने विश्वास गर्न सक्ने कारण छ। वास्तवमा, युटामा स्वास्थ्य बीमाकर्ता निश्चित औषधि किन्नको लागि सदस्यहरूलाई प्रोत्साहन दिनुहोस् लागत कम गर्ने प्रयासमा तिजुआनामा एउटा ठेक्का क्लिनिकमा।
फार्मास्यूटिकल कम्पनीहरूले मेक्सिकोमा उस्तै उत्पादनहरूलाई कम मूल्यमा बेच्दछन्, त्यसपछि अमेरिकीहरू लाई यी उत्पादनहरू सुरक्षित छैनन् भनेर बताउने स्नायु हुन्छ। यसले कुनै अर्थ राख्दैन, भन्छ काइल वार्नर, MD , एक चिकित्सक जसले मेक्सिकोमा औषधि र स्वास्थ्य सेवाहरू पाउँछन्। मेक्सिकोले फार्मास्यूटिकल्समा ठूलो व्यवसाय गर्दछ, र उच्च गुणस्तरको, प्रामाणिक औषधिहरू प्रदान गर्ने आर्थिक प्रोत्साहन छ, डा। वर्नर बताउँछन्।
फार्मेसीहरूले निर्माणकर्ताबाट मूल प्याकेजि inमा औषधि लिने छन्, र फार्मासिस्टको पक्षमा त्रुटिको लागि धेरै ठाउँ छैन, उनी भन्छन्।
डा। वार्नरका अनुसार तपाईले खोजिरहनु भएको औषधि र वैध फार्मेसी कहाँ खोज्ने भनेर थाहा पाउनु भएसम्म मेक्सिकोमा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स किन्नु भनेको तपाईको पैसा बचाउन सक्छ।
मेक्सिकोमा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स किन्दै
तपाईंले विश्वास गरेको फार्मेसी खोज्नुहोस् : यदि तपाईं बोर्डरमा पर्चेको औषधिहरू खरीद गर्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने, निश्चित गर्नुहोस् कि उनीहरूलाई लाइसेन्स प्राप्त, फार्मेसीबाट किन्नुहोस् rand यादृच्छिक व्यक्तिहरू होइनन् जसले तपाईंलाई ती स्थानहरू बाहिर औषधि बेच्न कोशिश गर्न सक्दछन्।
तपाइँको डाक्टरको स्वीकृति बिना औषधि किन्न छैन : सँधै - यो दोहोर्‍याउन लायक छ: सँधै — प्रिस्क्रिप्सन औषधिको लागि तपाइँको डाक्टरको सिफारिसहरू सुन्नुहोस्। यद्यपि अन्य औषधीहरू बिना पर्चे बिना बिक्रीको लागि उपलब्ध हुन सक्छ, ती तपाईंको स्वास्थ्यलाई नोक्सान गर्न सक्दछन्।
के तपाईं फिर्ता ल्याउने बारेमा सावधान रहनुहोस् : अमेरिकी सीमा शुल्क र सीमा सुरक्षाको सीमा पार पार गर्ने औषधि ल्याउने बारे कडा नियमहरू छन्। साधारणतया, केहि नुस्खा को तीन महिना को आपूर्ति तपाईंको डाक्टरको नोटसहित स्वीकार्य छ, डा। वार्नर बताउँछन्। तर नियन्त्रणित पदार्थका लागि यसको बारेमा पनि नसोच्नुहोस्, जस्तै पीडा औषधि, उनी चेतावनी दिन्छन्। तिनीहरूले तपाईंलाई लागूपदार्थको तस्करीको साथ शुल्क लिन सक्छन्।
मेक्सिकन फार्मेसी अनलाइन
यदि तपाईं विदेश भ्रमणको योजना गर्दै हुनुहुन्न भने, के तपाईं मेक्सिकोबाट प्रिस्क्रिप्शनहरू अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ? यो एक साधारण प्रश्न हो - र यो सीमा पार गर्न भन्दा सजिलो लाग्न सक्छ। औषधिको साथ केवल एक क्लिक मात्र टाढाको रूपमा देखा पर्दछ, यो प्रलोभनमा पर्न सक्छ आदेश मात्र हिट गर्न, त्यसपछि कुर्नुहोस् र हेर्नुहोस्। तर, खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) सिफारिस गर्दछ अन्य देशहरूबाट प्रिस्क्रिप्शन किन्नको बिरूद्धमा किनभने औषधि निर्माणको नियमन बढी ढिलो हुन सक्छ, वा फार्मेसी नक्कली हुन सक्छ। र, यदि तपाइँ प्रिस्क्रिप्शन बिना अर्डर गर्नुभयो भने तपाइँको प्याकेज कब्जा गर्न सकिन्छ।
यदि तपाईं मेक्सिकन फार्मेसी अनलाइनबाट प्रिस्क्रिप्सनहरू अर्डर गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, निश्चित गर्नुहोस् एफडीए सिफारिसहरू । इजाजतपत्र जाँच गर्नुहोस्, र फार्मेसीको बोर्डहरूको राष्ट्रिय संघ (एनएबीपी) प्रमाणित इन्टर्नेट फार्मेसी अभ्यास साइटहरूको लागि खोजी गर्नुहोस्।सिल, VIPPS सील को रूप मा पनि चिनिन्छ।
कति समय पछि nexplanon प्राप्त गरीरहेको छ यो प्रभावी छ
म कहाँ खाली गोली बोतल दान गर्न सक्छु?
सेक्स पछि कति बेलुका गोली को काम पछि बिहान हुन्छ
यौन सम्पर्क गर्नु भन्दा पहिले भियग्रा कति समय सम्म लिने?
वयस्कहरु को लागी फरेनहाइट मा सामान्य शरीर को तापमान
कुन जन्म नियन्त्रण तौल घटाउन को लागी उत्तम छ
म कसरी राती मेरो रक्तचाप घटाउन सक्छु?